google play က app တွေ game တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ ဒီစာမျက်နှာမှာပဲ direct link ထုတ်ပြီး ဒေါင်းကြမယ် ~ mgkhainghtoo
ကဲ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ရှယ်ကြီးလာပါပြီနော်
Error: Embedded data could not be displayed. Android လုလင်ကဲ android လုလင် ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ရေ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ရှယ်ကြီးလာပါပြီနော် google play က app တွေ game တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ ဒီ page မှာပဲ direct link ထုတ်ပြီးပျော်ပျော်ကြီးဒေါင်းကြရအောင် အဆင့်(1)အောက်မှာပေးထားတဲ့ box ထဲမှာ ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ယူမယ့် google play က app link ကိုထည့်ပါ။ အဆင့်(2)Generate download link ကိုနိုပ်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ် ။ အောက်ကအစိမ်းရောင် button လေးဖြစ်တဲ့ click here to download .....ဆိုတာလေးကို နိုပ်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီးဒေါင်းကြစေဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်။ Error: Embedded data could not be displayed. Android လုလင် You might also like:
သင်ဒီကကူးလာတယ်နော် ဟဲ: http://androidlulin.blogspot.com/2013/10/google-play-app-game-direct-link.html
မူလစာရေးသူ -->>Android လုလင်(http://androidlulin.blogspot.com/)ကဲ android လုလင် ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ရေ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ရှယ်ကြီးလာပါပြီနော် google play က app တွေ game တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ ဒီ page မှာပဲ direct link ထုတ်ပြီးပျော်ပျော်ကြီးဒေါင်းကြရအောင် အဆင့်(1)အောက်မှာပေးထားတဲ့ box ထဲမှာ ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ယူမယ့် google play က app link ကိုထည့်ပါ။ အဆင့်(2)Generate download link ကိုနိုပ်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ် ။ အောက်ကအစိမ်းရောင် button လေးဖြစ်တဲ့ click here to download .....ဆိုတာလေးကို နိုပ်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီးဒေါင်းကြစေဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်။ Error: Embedded data could not be displayed. Android လုလင် You might also like: